Hay’adda SVO iyo Helping Hand oo si Wayn Uga Farxiyey Bulshada G Sool (Sawiro) | KALSHAALE
Hay’adda SVO iyo Helping Hand oo si Wayn Uga Farxiyey Bulshada G Sool (Sawiro)
Deeqdan ayaa ahayd mid la gaadhsiinayey Cusbitaalka guud ee laascaanood , xarunt agoomaha iyo qaar ka mida
goobaha waxbarashada ayaa waxaa gaadhsiisay Hay’ada Wadaniga ee SVO iyadoo ay la soo baxday deeqda hay’ada
Helping Hand oo fadhiigeedu yahay wadanka Maraykanka isla markaana ka shaqaysa arimaha hormarka iyo samafalka .
Deeqdan ayaa ka koobnad agab waxbarasho iyo mid Caafimaad iwm iyadoo u soo wakiilatay C/Kariin Siciid Awcabdi oo ah masuul ka tisan Hay’addan isla markaana ka shaqeeya arimaha samafalka iyo horumarinta bulshada ,
isagu deeqdan ka soo qaaday hay’ada .
Deedan ayaa la gaadhsiiye Xarunta agoomaha eeLaascaanood , iyo sidoo kale Cusbitaalka guud iyo wasaarada Waxbarashada oo iyana la sii wadaagtay qaar ka mida goobaha waxbarasho ee gobolka Sool , Waxaana deeqdan sidoo kale la gaadhsiin doonaa goobaha ugu baahida badan ee degmada Laascaanood.
Dhanka Masuuliyiinta Cubsitaalka guud , Gudoomiyaha Waxbarashada G Sool iyo Maamulaha xarunta agoomaha ee degmada lasanod ayaa ka mahad naqay deeqdan Hay’ada SVO iyo sidoo kale C/Kariin Siciid iyo Xildhibaan Indho Indho oo isna door ku lahaa deeqdan inay halan soo gaadho .
C/Kariin Siciid oo ka mid ah masuuliyiinta ugu sarreeya Hay’adda Waddaniga ah ee SVO si wayn uga shaqeeya Taakulaynta dadka iyo jilicsan Danyarta iyo dhalinyarada gobolka Sool Sanaag iyo Cayn ayaa ku guulaystay inuu gobolka ka fuliyo mashaariic badan oo dhanka horumarinta iyo sidoo kale u gargaarida dadka is deberta